बिहानै चाँडै उठ्दा हुन्छ फाइदै फाइदा ! आइतवार, पुष ६, २०७६
विवाहित महिलाप्रति पुरुष किन आकर्षित हुन्छन् ? आइतवार, पुष ६, २०७६
स्वास्थ्यचौकीलाई करोड बढीको जग्गा निःशुल्क शनिवार, पुष ५, २०७६
चिसोमा खानुस् कोदोको ढिँडो र लोकल कुखुराको सुप कोदोको रोटी तथा ढिँडो नखाने नेपाली कम नै होलान् । चिसो मौसममा तातो र मिठो परिकार खाने चलन धेरैको हुन्छ । शुक्रवार, पुष ४, २०७६
अस्पतालद्वारा औषधि बिक्रिमा सिण्डिकेट बाँकेमा रहेको नेपालगन्ज शिक्षण अस्पतालले औषधि बिक्रिवितरणमा सिण्डिकेट लगाएको खुलासा भएको छ । केही समयअघि मात्रै औषधि बिक्रि शुरू गरेको उक्त अस्पतालले मनपरी रूपमा नियमविपरित औषधि बिक्रिमा सिण्डकेट नै लगाएको औषधि व्यवसायी संघ, बाँकेले खुलासा गरेको हो । बिहिवार, पुष ३, २०७६
रगत संकलन अभियान थालनी बाँकेको नेपालगन्जमा रगत अभाव देखिन थालेपछि नेपाल रेडक्रस सोसाईटी अन्तर्गत क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रले रगत संकलन अभियानको थालनी गरेको छ । बिहिवार, पुष ३, २०७६
बर्थिङ सेन्टर र प्रयोगशाला सञ्चालनमा पनौती नगरपालिकाले वडा नं ७ मा रहेको पनौती स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर र प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । पनौतीको मुख्य बजारमा बढ्दो जनसङ्ख्याको चापलाई ध्यानमा राखेर बर्थिङ सेन्टर र ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको हो । बुधवार, पुष २, २०७६
लुम्बिनी प्रदेशमा १८.९ प्रतिशत नागरिकमा जोर्नीको समस्या प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको जिम्मेवारी पाएको बिशेष समितिले प्रस्तावित गरेको लुम्बिनी प्रदेशमा १८ दशमलव ९ प्रतिशत नागरिकमा जोर्नीको चरम समस्या देखिएको छ । सोमवार, मंसिर ३०, २०७६
उच्च रक्तचाप भएकाहरुले यौनसम्पर्क गर्दा के हुन्छ ? उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिकालागि यौन सम्पर्क घातक हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । आइतवार, मंसिर २९, २०७६
किन चिलाउँछ योनी ? प्रायः सबैजसो महिलाहरु आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै क्षणमा योनी चिलाउने समस्याबाट गुज्रिएका हुन्छन् । कहिलेकाँहि यसो हुनु सामान्य भएपनि लामो समयसम्म चिलाइराख्नु वा बारम्बार चिलाइराख्नु भने राम्रो होइन । आइतवार, मंसिर २९, २०७६
योनीको १० रोचक तथ्य यस्ता छन् यौनको विषय मानिसको सर्वा्धिक चासोको विषय भएतापनि समाजको यसको खुल्ला चर्चा वर्जित भएकाले आफ्नै यौनांगका बारेमा धेरै कुराहरु मानिसलाई थाहा नहुन सक्छ । आइतवार, मंसिर २९, २०७६
सन्तान जन्मिएको कति दिन पछि मात्रै यौन सम्पर्क गर्ने ? महिलाहरुको शरीर सन्तान जन्मिएको केही समयसम्म यौन सम्पर्कको लागि तयार भएको हुँदैन । सन्तान जन्मिदाको प्रसव पिडाबाट ठीक हुन केही समय लाग्छ । अब कुरा रह्यो कति दिनमा ठीक हुन्छ त महिलाहरुको शरीर ? आइतवार, मंसिर २९, २०७६
लिंग उत्तेजित हुदैन, यसो गर्नुहोस् प्रायः पुरुषले कुनै न कुनै बेला भोग्ने गरेको समस्या हो, ‘इरेक्टायल डाइफङ्गसन’ अर्थात लिंग उत्तेजित नहुने समस्या । व्यक्तिका लागि यौन आधारभूत शारीरिक आवश्यकताका रुपमा रहेको छ। आइतवार, मंसिर २९, २०७६
स्थानीय तह उदासिन, जनस्वास्थ्य वेखबर बाँकेको नेपालगन्ज र यहाँका आठवटै स्थानीय तहमा अबैद्य मेडिकल माफियाको बिगबिगी बढेको छ । यसले गर्दा सेवाग्राहीले प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन् । बिहिवार, मंसिर २६, २०७६
छैनन् निःशुल्क र जीवनरक्षक औषधि नेपाली औषधि बजारमा जीवनरक्षक औषधि अभाव भएको छ । औषधि आयातसम्बन्धी स्पष्ट पैठारी नीति नबनेकाले जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई चाहिने अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधि अभाव भएको हो । बुधवार, मंसिर २५, २०७६
करोड लागतको एक्स–रे मेसिन वेवारिसे नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले जमुनहा नाकास्थित यात्रु शाखामा जडान गरेको सामान जाँच गर्ने डेढ करोडको एक्स–रे मेसिन बिग्रिएको छ । बुधवार, मंसिर २५, २०७६